बच्चा जन्माउन चाहने महिलाले अस्थायी साधन कहिले छाड्ने ?  Hamrosandesh.com
बच्चा जन्माउन चाहने महिलाले अस्थायी साधन कहिले छाड्ने ?
बच्चा जन्माउन चाहने दम्पतीले परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको प्रयोग कहिलेबाट छाड्ने भन्ने कुरा प्रयोग गर्ने साधनका आधारमा भर पर्छ । सामान्यतया बच्चाको योजना बनाएका दम्पतीले तीन महिनादेखि नै परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न छाड्नुपर्छ । हर्मोनल औषधि जस्तै पिल, सुई प्रयोग गर्नेहरुले यस्ता साधन प्रयोग गर्न छाडेको तिन महिना पछि मात्र गर्भधारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य जाँच गरेपछि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम गर्भको योजना बनाउनु पर्छ ।
गर्भधारणका समयमा महिला र पुरुष दुवैले राम्रो मनोभावना राख्ने, नडराउने, चिन्ता नलिने, झगडा नगर्ने, शरीर सफा राख्ने, कपडा सफा लगाउने गर्नुपर्छ । गर्भधारणका समयमा महिलाजति तनावबाट मुक्त रहन्छिन्, बच्चा पनि त्यति नै स्वस्थ र सुन्दर रहन्छ । यस्तै गर्भवती भएपछि नियमित चेकजाँच गर्ने, पर्याप्त मात्रामा खानपिन गर्ने, भारी कुरा नबोक्ने र नियमित चिकित्सकको सम्पर्कमा रहने गर्नुपर्छ ।
स्वस्थ बच्चा जन्माउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर भनेको २० देखि ३० वर्षसम्मको उमेर हो । त्यसपछि क्रमशः उमेर बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्दै जान्छ ।स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा ३५ वर्षसम्मका महिलाले राम्रोसँग बच्चा पाउन सक्छन् । त्यस्तै २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले पनि बच्चा पाउँदा जोखिम हुन्छ ।
बढ्दो उमेरका अतिरिक्त आधुनिक जीवनशैली, तनाव र प्रदूषणका कारण पनि प्रजनन शक्तिमा असर पर्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह वा थाइराइडजस्ता रोग प्रजनन शक्तिका लागि बाधक हुन् । यस्तै, उमेरखाएका महिलामा गर्भाशयको ट्युमर हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।